यसरी पनि सहजै तौल घटाउन सकिन्छ
एजेन्सी । यदी तपाईले बेली घटाउने निर्णय पुर्ण दृणका साथ लिनुभएको छ भने सजिलो उपायकासाथ स्वस्थ रुपमा बिनाकाम बेली घटाउने उपायका बारेमा जान्नुहोस् । खानु र व्यायामले मात्रैले बेली घट्ने गर्दैन यसका लागि एउटा प्रक्रियामा रहेर पेय पदार्थ लिने काम गर्नुपर्छ ।
केही यस्ता पेय पदार्थहरु रहेका छन् जसका कारण तपाईको मोटोपन घट्ने काम गर्छ । यी हुन् टप ७ पेय पदार्थ जसका कारण सजिलै मोटोपन घटाउन सकिन्छ ।
१. आइस कोल्ड वाटर
चिसो पानी पिउनाले मेटाबोलिक प्रक्रियालाई तिब्रता दिने काम गर्छ । यसले तपाईको धेरै क्यालोरी खर्चिने काम गर्छ ।
दैनिक १६ औस चिसो पानी खानुहोस् र नतिजा हेर्नुहोस् ।
२. नरिवल पानी
नरिवल पानीमा अरुभन्दा बढी इलेक्ट्रीलाइट हुनेगर्छ । जति धेरै इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ त्यतिधेरै हाइड्रेट गर्ने काम गर्छ । यस पेथ पदार्थमा तपाईलाई कृत्रिम फ्लेवर र चिनी मिसाउनु समेत आवश्यक पर्दैन । यसले मेटाबोलिजमलाई तिब्रता दिने काम गर्छ भने अर्को तर्फ शक्ति प्रदान गर्ने काम समेत गर्छ ।
३. तर हटाएको दुध (स्किम मिल्क)
तरसँगैको दुध पिउनाले शरिरमा चिल्लोपना बढाउने काम गर्छ । यसले शरिरमा बोसो बढाउने काम गर्छ । धेरै न्युट्रिसनस्टका अनुसार स्किम मिल्क पिउनाले तपाईले ७० प्रतिशत फ्याटबाट बच्न सक्नुहुन्छ । प्रत्येक दिन स्किम मिल्क पिउनुहोस् र यसको फाइदा थाहा पाउनुहोस् ।
४. तरकारीको जुस
तरकारीहरु स्वास्थ्यको लागि एकदमै फलदायी मानिन्छन् । तरकारी खानुभन्दा पनि दैनिक एक गिलास तरकारीहरुको जुस पिउनु शरिरको लागि फलदायी हुन्छ । यसले अनावश्यक मोटोपन बढ्न दिदैन भने मोटोपन कम गर्न पनि मदत गर्छ ।
तरकारीको जुस खाँदा शरिरले कम क्यालोरी पाउने गर्छ । १३५ क्यालोरीभन्दा कम शरिरले प्राप्त गर्छ ।
५. पोषणयुक्त पेय पदार्थ
यस्ता पेथ पदार्थ स्वास्थका लागि राम्रा मानिन्छन् । तर प्राकृतिक रुपमा पनि यसले मानिसमा सकारात्मक असर पार्ने काम गर्छन् । यदी तपाई बजारमा रहेका यस्ता पोषणयुक्त पेथ पदार्थ प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने एकपटक चिकित्सकको सुझाव लिनुपर्छ । एकपटक प्रमाणित गरिसकेपछि पोषणयुक्त विभरेज तपाईको स्वास्थ्यका लागि फाइदा छ कि छैन थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ।
६. ग्रिन एण्ड ब्ल्याक टि (हरियो र कालो चिया)
तपाईले ग्रिन र ब्ल्याक टि को बारेमा थाहा पाउनु भएकै होला । यसको प्रयोगले पनि मोटोपन घटाउन धेरै मदत गर्छ । शरिरमा मेटाबोलिक प्रक्रियालाई तिब्रता दिन यसले मदत गर्छ । ग्रिन टिले ४३ प्रतिशतभन्दा बढी चिल्लो जलाउने काम गर्छ । यो प्रक्रिया कालो चियामा पनि लागु हुन्छ ।
७. खर्बुजाको रस
यसको रस पिउनाले शरिरमा हाड्रेड पैदा गर्ने काम गर्छ । यसका कारण शरिरमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्दैन । यसमा थोरै क्यालोरी हुने र धेरै पानी हुने गर्छ । यसले आर्जिनाइन पैदा गर्ने काम गर्छ जसमा अमिनो एसिड हुन्छ । उक्त एसिडले चिल्लो काट्ने र मोटोपन कम गराउने काम गर्छ ।